माइली साइरसबाट सम्बन्ध विच्छेदको लागि लियाम हेम्सवर्थ फाइलहरू - समाचार
लियाम हेम्सवर्थ बाट आधिकारिक रूपमा सम्बन्ध विच्छेदको लागि दायर गरेको छ माइली साइरस विवाह को एक बर्ष भन्दा कम पछि
लस एन्जलस मा उनको सम्बन्धविच्छेदन भर मा, अभिनेता टीएमजेडका अनुसार, कारण 'अपरिवर्तनीय मतभेद' उल्लेख गरे। किनकि ती दुवैले बच्चाहरू साझेदारी गर्दैनन् र उनीहरूसँग आइरनक्लाइड पूर्वपूर्व सम्झौता रहेको छ, यसैले सम्बन्ध विच्छेद पर्याप्त कट र सुख्खा हुने आशा गरिन्छ।
KYLE GRILLOT / AFP / गेट्टी छविहरू
विभाजनको मिति 'TBD' को रूपमा सूचीबद्ध छ।
औपचारिक तलाक भरिने जोडी पछि दुई हप्ता भन्दा कम आउँछ तिनीहरू छुट्टिए भनेर घोषणा गरे ।
लियाम 'विवाहभन्दा माथि छ' र बस मा जान चाहन्छन्, टीएमजेडले भने, माईले यस हप्ताको रूपमा भर्खरै पछाडि पार गरेकी थिइन्, उनी विवाहमा काम गर्न चाहेको बताउँछिन्। लियाम, तथापि, यसलाई सजिलो होस् भनेर तयार थियो।
सम्बन्ध विच्छेद फाइल केही हदसम्म आश्चर्य को रूप मा देख्न सकिन्छ, मात्र पछिल्लो हप्ता ई! समाचारले भने कि माइली र लियामका परिवारहरू दुवैले लिन चाहेका थिए कठोर कुनै पनि गर्न भन्दा पहिले रोक्नुहोस् ।
'उनीहरूको परिवारले अन्तिम निर्णय लिनु भन्दा पहिले सास फेर्न केही समय लिन आग्रह गरेका छन्,' एक स्रोतले ईलाई भने! 'ती दुबै दु: खी छन् कि यसले कसरी उडायो र दुबै अहिले चित्त दुखिरहेछ।'
ट्र्याभिस स्कट र काइली जेनर
माइली र लियामको १०-बर्ष सम्बन्धले स up्लग्नता र नयाँ सम्बन्धहरू सहितको धेरै उतार-चढावहरू देख्यो। उनीहरूले पछि मिलाप गरे, २०१ engaged मा स engaged्लग्न भयो र डिसेम्बर २०१ in मा गाँठो बाँध्यो।
एक स्रोतले माइली र लियामको पीपल म्यागजिनलाई भने, 'जब तिनीहरू सम्बन्ध निर्माण गर्ने आधारभूत चीजहरूको धेरै कुरा आउँछन् तिनीहरू समान पृष्ठमा हुँदैनन्।'
E! 'S स्रोत,' उनीहरूको सम्बन्ध पूर्ण रूपमा परिवर्तन भयो। ... माइली फेरि स्टुडियोमा गइन् र उनको नयाँ संगीतको बारेमा केन्द्रित र गम्भीर थिइन्। '
म्याट ब्यारन / आरईएक्स / शटरस्टक
विभाजन पछि, माइली एक नयाँ गीत, 'स्लाइड टाढा', कि उनको विवाह को अन्त मा सबै लाग्छ देखि ड्रप। थप रूपमा, माइले भर्खरै फोटो खिचेको थियो भावुक चुम्बन गर्दै इरोटामा ब्रोडी जेनरको पूर्व, क्याटलिन कार्टर, (लिआम भनिन्थ्यो) चित्रहरुमा 'विनाशकारी' ।) महिलाहरू भेटियो फेरि बाहिर बनाउने यस हप्ता लस एन्जलस मा।
माइली साइरस र क्याटलिन कार्टर फेरि बाहिर देखा परेको छ: रिपोर्ट
Khloe Kardashian को नयाँ रूप शायद आफ्नो उपस्थिति परिवर्तन भएको पहिलो पटक नै हो
gma मा लारा स्पेन्सर कहाँ छ?
रिकी मार्टिन ऊ विवाहित हो